मेसीले नेपालको पुर्ननिर्माणमा सघाउने
एजेन्सी । अर्जेन्टियन फुटबलका स्टार स्ट्राइकर लियोनल मेसीले नेपालको पुर्ननिर्माणमा सघाउने भएका छन्। युनिसेफ नेपालसँग सहकार्य गरेर मेसीले नेपालमा २०७२ वैशाख १२ गते गएको शक्तिशाली भूकम्पपछिको पुर्ननिर्म...
एशियन कप फुटबलका लागि अन्तिम टोलीको घोषणा, को को परे टोलीमा ?
काठमाडौँ । एएफसी एशियन कप २०१९ को छनोट अन्तर्गत फिलिपिन्स विरुद्धको खेलका लागि नेपाली टोलीको घोषणा गरिएको छ । एन्फा कम्प्लेक्स सातदोवाटोमा २० दस्सीय टोलीको घोषणा गरिएको हो । बन्द प्रक्षिणमा रहेका २७ ज...
लक्ष्मीहुण्डार्ई ले Hyundai Open Golf Tournament को आयोजना गर्दै
काठमाडौं । नेपालको लागी हुण्डार्ई गाडीको एक मात्र अधिकृत बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टीनेन्टल प्रा.ली. ले बिगतका वर्ष झैं यस वर्ष पनि Hyundai Open Golf Tournament 2017 को आयोजना गर्ने भएको छ । उक्त टुर्न...
पारस वीनै एसीसी इमर्जिङ टिम्स कप खेलका लागि क्रिकेट टोलीको घोषणा
काठमाडौं । बंगलादेशमा मार्च २५ देखि आयोजना हुने एसीसी इमर्जिङ टिम्स कपका लागि नेपाली क्रिकेट टोलीको घोषणा गरिएको छ । पारश खड्का वीना टोली घोषणा भएको छ । ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा घोषित १५ सदस्यीय ...
केन्याविरुद्ध नेपाल मैदानमा, नेपालको प्रदर्शनमा सुधार(लाइभ भिडियो)
काठमाडौं । आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपाल र केन्याको दोस्रो खेल सुरू भएको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा नेपालले टस जितेको फिल्डिङ रोजेपछि अहिले. केन्या व्याटिङ गरिहे...
काठमाडौं । विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसीप अन्तर्गत शनिवारको भएको खेलमा नेपाल केन्यासंग ५ विकेटले पराजित भएको छ । डिएल मेथडअनुसार भएको खेलमा केन्याले ९३ रनको लक्ष्य २४ . १ ओभरमा ५ विकेट गुमाएर भेट्टाए...
वर्षाका कारण नेपाल र केन्याबीचको जारी खेल अवरुद्ध
काठमाडौं । विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपमा शनिबार नेपाल र केन्याबीच भइरहेको खेल वर्षाका कारण रोकिएको छ । केन्याले टस जितेर फिल्डिङ रोजेसंगै नेपाललाई ब्याटिङको निम्तो पाएर व्याटिङ्ग गरिरहेको नेपालले...
नेपालसंग प्रतिश्पर्धा गर्न केन्याको क्रिकेट टोली काठमाडौँमा
काठमाडौं । आइसीसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपालसँग खेल्न थालेको केन्याको क्रिकेट टीम नेपाल आई पुगेको छ । आउँदो शनिवार र सोमवार किर्तिपूर क्रिकेट मैदानमा नेपाली टोलीसँग खेल्न लागेको क...
केन्याविरुद्ध खेल्ने नेपाली टोलीको घोषणा, को को छन् टोलीमा ?
काठमाडौं । विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तरगत केन्याविरुद्ध खेल्नका लागि नेपाली टोलीको घोषणा भएको छ । १४ सदस्यीय टोली रहेको उक्त टिमका कप्तानी भने पारसले सम्हाल्ने भएका छन् । अलराउण्डर मेहबुब आल...
पाकिस्तानि क्रिकेटर अफ्रिदीद्वारा अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा
काठमाडैं । पाकिस्तानका पूर्व कप्तन शाहिद अफ्रिदीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन्। यसअघि नै टेष्ट र वान डे बाट सन्यास लिइसकेका अफ्रिदीले टी २० क्रिकेटबाट पनि सन्यास लिएका हुन्। स...
काठमाडौँ । नेपाली राष्ट्रिय टिमका कप्तान पारस खड्काको ‘एपेन्डिसाइटिस’ को सफल शल्यक्रिया भएको छ। चिकित्सकको राय बमोजिम केही समय स्वास्थ्य लाभ गर्नु पर्ने भएका कारण कप्तान खड्का भारतको आसन्न अभ्यास सत्...
हिउँदे खेलकुदका लागि ११ सदस्यीय टोली जापान प्रस्थान
काठमाडौँ । जापानको सापोरा शहरमा सुरु हुन गईरहेको हिउँदे खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागि हुन खेलाडी तथा पदाधिकारीहरुको एक टोली शुक्रबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको छ । नेपाल ओलाम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम...
काठमाडौं । विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तरगत केन्याविरुद्ध खेल्नका लागि बन्द प्रशिक्षणका लागि २४ खेलाडी छनोट भएकाछन् । पारस खड्काको कप्तानीमा रहेको टोलीमा आरिफ शेख र आसिफ शेख दाजुभाइ नै परेका छन...
काठमाडौ । रशियाले नेपालको खेल क्षेत्रको विकासका लागि आधुनिक पुर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । नेपाल ओलाम्पिक कमिटिका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाली टोलीसंग रूसको काजान शह...
काठमाडौ । नेपाल ओलाम्पिक कमिटिका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ आधुनिक खेल पुर्वाधार अवलोकनका लागि रशिया प्रस्थान गरेका छन् । आगामी तेह्रौँ दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) को तयारीका लागि आवश्यक भौत...
खेलकुद क्षेत्र सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको छः मन्त्री श्रीपाइली
काठमाडौँ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपाइलीले नेपालको खेलकुद क्षेत्र पछिल्लो समय सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेको बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिवार काठमाण्डौमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उ...
गौशाला । महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फुटवल रङ्गशाला निर्माणकार्य सुरु भएको छ । जिल्ला सदरमुकामको मुटु मानिएको जलेश्वर नगरपालिका–५ मा अवस्थित जलेश्वर रङ्गशालालाई अन्तर्र...
‘यो भवन अन्तराष्ट्रिय ओलाम्पिक कमिटिले बनाईदिएको हो । उसले हामीलाई प्रयोग गर्न मात्र दिएको हो । आईओसीले मान्यता नदिएको समुहले उसैले बनाईदिएको भवनमा तालाबन्दी लगाउँदा त्यसको परिणाम घातक हुन सक्छ । ख...
काठमाडौं । नेपाल र हंङकङका राष्ट्रिय तेक्वान्दो खेलाडीबिच मैत्रिपुर्ण खेल हुने भएको छ । नेपाल तेक्वान्दो संघको आयोजनामा हुने मैत्रिपुर्ण खेल माघ १९ गते कोटेश्वर फिटनेश क्लबमा हुने राष्ट्रिय तेक्वान्दो...